Ciyaarihii ugu dambeeyay ee bilaashka ah ee Android - Sii deynta, Faallooyinka, Xeeladaha | Androidsis (Bogga 7)
Ciyaaraha xeegada barafka ee ugu wanaagsan Android
Afarta kulan ee xeegada barafka ee ugu wanaagsan Android. Soo ogow xulitaankan cayaaraha isboorti oo aad hadda kala soo bixi karto Play Store.
Ciyaaraha turubka ugu fiican ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu fiican turubka ee Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xulkan cayaaraha oo aan hadda diyaar ugu nahay Android.
Fortnite for Android ayaa si rasmi ah u bilaabi doona xagaagan
Fortnite wuxuu si rasmi ah u imanayaa taleefannada Android xagaagan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilawga ciyaarta cusub ee isticmaaleyaal badani sugayeen. Lagu xaqiijiyay Ciyaaraha Epic.
Dragon Ball Legends Diiwaangelinta hore ayaa hadda furan
Diiwaangelinta hore ee Legends Dragon Ball ee Play Store. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan furitaanka kahor-diiwaangelinta ciyaarta dhowaan si aad uga hesho taleefannada Android.
Shanta kulan ee xiisaha badan ee Android. Soo ogow xulitaankan ciyaaraha xiisaha leh ee aan ku soo dejisan karno taleefankeena Android.
Ciyaaraha Android iyo barnaamijyada ugu faa iidada badan ee aan heli karno
Shan barnaamij oo gebi ahaanba aan waxtar lahayn ayaa laga heli karaa Android. Soo ogow barnaamijyadan iyo ciyaartan aan waxtar u lahayn isticmaalayaasha.
Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Nacnaca Waxaad Malaha Ma Ogtahay
Xiisaha ugu fiican ee ku saabsan Candy Crush oo aad ka heli karto. Soo ogow xaqiiqooyinka ugu xiisaha badan ee ku saabsan ciyaarta caanka ah ee qabsatay malaayiin isticmaale.
Miitomo, Nintendo kulankiisii ​​ugu horreeyay ee loogu talagalay barnaamijyada moobiilka, xaqiiqdii wuxuu hoos u dhigaa indhoolayaasha
Ciyaartii ugu horeysay ee Nintendo ee loogu talagalay barnaamijyada moobiilka, Miitomo ayaa joojisay shaqadii kadib markii Nintendo uu si joogto ah u xiray serverka.
Ku soo dejiso Dooxada Taallada oo bilaash ah maalmaha 7 oo keliya!
Qaado fursad aad ku soo dejiso Monument Valley bilaash toddobo maalmood oo keliya iyada oo ay ugu wacan tahay dalabkan xaddidan ee aad si toos ah uga heli karto Google Play Store.
Abaalmarinta Google Play 2018: Ciyaaraha guuleysta iyo barnaamijyada la muujiyay
Ku guuleystayaasha Abaalmarinta Google Play 2018 ayaa la shaaciyay. Soo ogow barnaamijyada iyo ciyaaraha u soo baxay inay ku guuleysteen abaalmarindan.
Ciyaaraha ugu fiican Google Daydream
Afarta ugu sarreysa Google Daydream ee hadda la heli karo. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan xulitaanka cayaarahaan aan u helnay isticmaaleyaasha leh xaqiiqada dhabta ah ee Google.
Ciyaaraha ugu fiican Pokémon ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu fiican Pokémon ee loogu talagalay Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan xulashada cayaaraha dhexdeeda taxannadda caanka ah ee aan uga helno taleefannada Android.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ciyaaraha isboortiga ee Android
Afarta kulan ee ugu wanaagsan cayaaraha biyaha ee loogu talagalay Android. Ka raadi waxbadan oo ku saabsan xulkan cayaaraha ee aan hadda u helno Android.
Ciyaaraha ugu fiican 3D ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu fiican 3D ee loo heli karo Android. Soo ogow xulitaankan ciyaaraha 3D ee hadda laga heli karo Play Store.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee GTA u eg ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu wanaagsan ee GTA u eg ayaa laga heli karaa Android. Soo ogow xulitaankan ciyaaraha GTA-qaabeed ee aan ku soo dejisan karno taleefankeenna Android.
Ciyaaraha Hackers-ka ugu fiican ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu fiican jabsiga loogu talagalay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan cayaaraha hacker-ka kaas oo naga dhigi doona inaan dareemo khibrad dhab ah. Waxaa laga heli karaa Play Store.
PUBG wuxuu kudarsan doonaa qaab cusub oo qof uguhoreeya ah [Muuqaal]
Cusboonaysiinta xigta ee Battle Royal PUBG ayaa noo oggolaan doonta inaan ku raaxeysano qaabka cusub ee ciyaarta qofka ugu horreeya.
Harry Potter: Sirta Hogwars hadda waxaa laga heli karaa Play Store
Ciyaarta la wada sugaayay ee Harry Potter: Hogwarts Mystery ayaa haatan diyaar u ah in laga soo dejiyo Dukaanka Play-ka qaybtiisa bilaashka ah.
PUBG waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo qaab arcade cusub
Ciyaarta PUBG ayaa hada la cusbooneysiiyay iyadoo lagu daray taxane ah astaamo cusub oo nagu qasbi doona inaan sii wadno ciyaarista sidii in aysan jirin berri.
Ka ciyaarista majaajillo gudaheeda Waxaad ka baqaysaa !!
Maanta waxaan fulin doonnaa riyada in ka badan hal tan iyo markii aan ku ciyaareyno gudaha majaajillada qaab gebi ahaanba suugaan ah.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Ciyaaraha Console oo loogu talagalay taleefannada Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xulkan cayaaraha ee lagu sii daayay qunsuliyadaha oo hadda laga heli karo Android.
Android Excellence: 24-ka barnaamijyadooda ugu fiican iyo ciyaaraha sida ku cad Google
Android Excellence: 24-ka kulan ee ugu wanaagsan iyo barnaamijyada loogu talagalay Android. Soo ogow liiska ay abaabushay Google kaas oo cayaaraha ugu fiican iyo codsiyada loogu talagalay Android la doorto illaa iyo sanadkaan.
Harry Potter: Hogwarts Mystery oo imanaya iOS iyo Android markay tahay Abriil 25
Harry Potter: Hogwarts Mystery wuxuu yimaadaa Android bisha Abriil 25. Taariikhda rasmiga ah ee lagu soo bandhigi doono ciyaarta sheekada caanka ah ee seddex toddobaad gudahood ku imaaneysa Android ayaa horeyba loo xaqiijiyay.
Waxaad hadda kala soo bixi kartaa beta-ka Harry Potter: Hogwarts Mystery
Waxaad hadda isku dayi kartaa beta-kii ugu horreeyay ee Harry Potter: Hogwarts Mystery, oo ah beta noo ogolaanaya inaan tijaabino gacanta hore ee muuqaalka wanaagsan ee, hadda, ciyaarta sheeko xariirta u egtahay inay leedahay.
Lix bilood kadib markii qiimo dhimis weyn lagu sameeyay ciyaarta Super Mario Run, Nintendo ayaa markale jaraysa sicirkeeda kalabadh 15 maalmood laga bilaabo Maarso 10.
Shadowgun Legends ayaa dhowaan imaan doona Android: hadda waad iska qori kartaa Google Play
Shadowgun Legends ayaa dhowaan iman doona Android: hadda waad iska qori kartaa Google Play. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaatinka qaybta cusub ee taxanaha caanka ah.
Ciyaaraha ugu fiican ee lagu raaxeysto sida lamaanaha Maalinta Jacaylka
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa 10ka ciyaar ee ugu geesinimada iyo xiisaha badan inaad ku raaxeysatid lammaanahaaga, ama iyada la'aanteed, Maalinta Jacaylka.
Ciyaaraha istiraatiijiyad-waqtiga ugu fiican ee loogu talagalay Android
5-ta kulan ee istiraatiijiyad-waqtiga dhabta ah ee ugu wanaagsan Android. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan xulitaanka cayaaraha nooca ETR ee la heli karo.
Ciyaartii ugu horeysay ee Nintendo ee ku saabsan mobilada mobilada, Super Mario Run, ayaa hada dhaaftay 100 milyan oo laga soo dejiyay Google Play Store.
Ciyaaraha ugu adag ee Android
Saddexda kulan ee ugu adag Android. Kala soco xulashadan ciyaaro aan kuu fududeyn doonin adiga waqti kasta. Marka u diyaar garow caqabada.
Beddelka ugu fiican ee Mario Kart ee ku saabsan Android
Afarta beddel ee ugu fiican ee loogu talagalay Mario Kart on Android. Soo ogow afartan kulan ee ah bedelka saxda ah ee ciyaarta Nintendo.
Ciyaaraha retro ee ugu wanaagsan Android
Afarta kulan ee ugu wanaagsan ee retro ee loogu talagalay Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan ee aan maanta ka heli karno Android.
Socdaalka Mario Kart ee la filayo wuxuu noqon doonaa bilaash-bilaabi (bilaash-ciyaar)
Cinwaanka weyn ee xiga ee Nintendo uu qorsheynayo inuu suuqa ka soo saaro wuxuu noqon doonaa Mario Kart Tour, ciyaar ah mid bilaash u ciyaari doonta isla markaana dhexgeli doonta iibsashada barnaamijka iyo sidoo kale cinwaannadii ugu dambeeyay ee ay ka bilowday suuqa.
Ciyaaraha kediska ugu fiican ee Android
Shanta kulan ee ugu fiican kediska ee Android. Baro xulkan cayaaraha ah ee aqoontaada u geyn doona imtixaanka.
Ciyaaraha dhismaha ee ugu wanaagsan Android
Shanta kulan ee ugu fiican dhismaha ee Android. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan xulashadan cayaaraha dhismooyinka ugu fiican ee aan ka helno Android.
Ciyaaraha doonta ugu fiican ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu fiican doonyaha loogu talagalay Android. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan xulashadan cayaaraha doonta ugu fiican ee aan ka heli karno Android.
Afar kulan oo nasiino ah oo loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu nasashada badan Android. Kala soo bax xulashadan cayaaraha nasashada ugu fiican ee aan ka heli karno aaladaha Android.
Ku raaxayso golf yar oo aan hore loogu arag Mini Golf King
Maanta waxaan ka hadleynaa ciyaarta Mini Golf King, mid ka mid ah kuwa ugu yar yar ee dahabiga ah ee aan ka heli karno Bakhaarka Dukaanka, ma ahan in la yiraahdo waa kan ugu fiican, mahadnaqa ma ahan oo keliya sawiradeeda cajiibka ah, laakiin sidoo kale fursadaha ku ciyaarista khadka tooska ah iyo dhacdooyinka kala duwan.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee ciyaaraha jiilaalka ee loogu talagalay Android
Ciyaaraha ugu wanaagsan ciyaaraha jiilaalka ee Android. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan cayaaraha ugu wanaagsan ee cayaaraha xilliga qaboobaha oo aad soo dejisan karto.
Ciyaaraha guddiga ee ugu wanaagsan Android
Ciyaaraha guddiga ee ugu wanaagsan Android. Ku soo hel xulashadan xulalka guddiga ugu fiican ee aan hadda ka heli karno aaladaha Android.
Nintendo inuu xiro Miitomo bishii May
Miitomo: Nintendo kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Android wuxuu xirmayaa Maajo. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xiritaanka ciyaartii ugu horreysay ee shirkadda ay u siidaysay Android.
Liiska cayaaraha loo habeeyay bandhigga '120Hz' ee Razer Phone
Telefoonka cusub ee cajiibka ah ee Razer, ayaa hada soo saaray liis ay ku qoran yihiin cayaaro maanta ay durba la jaan qaadi karaan shaashadda 120 Hz
Shanta kulan ee waqtiga ugu fiican ee Adventure ee Android. Raadi wax badan oo ku saabsan cayaaraha ugu fiican ee ku saleysan taxanaha caanka ah.
Liistada la cusbooneysiiyay ee cayaaraha lacag la'aanta ah ee la xaddiday waqti xaddidan Google Play Store. Liistada la cusbooneysiiyay taariikhda ansaxnimada dalabka.
25-ka kulan ee ugu sareeya 2017
Waxaan idiin soo gudbineynaa 25-ka kulan ee ugu caansan ee looga hadlay inta badan dukaanka Play inta lagu gudajiray 2017, laga yaabee in qaar ay maqan yihiin, laakiin wali waxaan sii dhigi karnaa kuwa kale oo badan
Ciyaaraha ugu fiican ee khadka tooska ah ee loogu talagalay Android
Ciyaaraha ugu fiican ee khadka tooska ah ee loogu talagalay Android. Soo ogow lixdaan kulan ee Android ee aan u baahnayn xiriir internet. Download iyaga hadda.
Kuwani waa barnaamijyada iyo cayaaraha ugu fiican ee 2017 sida laga soo xigtay Google
Kuwani waa barnaamijyada iyo cayaaraha ugu fiican ee 2017 sida laga soo xigtay Google. Soo ogow ciyaaraha iyo barnaamijyada ay Google u maleynayso inay yihiin kuwa sanadka ugu fiican.
Naruto x Boruto: Ninja Voltage hadda waxaa laga heli karaa macruufka iyo Android
Ciyaarta cusub Naruto x Boruto: Ninja Voltage ayaa hada laga heli karaa aduunka oo dhan. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ficilkan RPG.
Ka Gudubka Xayawaanka: Xerada Jeebka waxay ku guuleysataa 15 milyan oo soo degsiin ah muddo 6 maalmood ah
Ka Gudubka Xayawaanka: Xerada Jeebka ayaa horeyba uga dhaaftay 15 milyan oo soo degitaan lix maalmood gudahood. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha ciyaarta Nintendo.
5 kulan Android ku saleysan taxanaha TV
5 kulan Android ku saleysan taxanaha TV. Kala soo xul xulkan ciyaar ku saleysan taxanaha telefishanka.
Mashruuca Dragon ee loogu talagalay Android - Dib u eegis
Mashruuca Dragon ee loogu talagalay Android - Dib u eegis. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan kulankaan istiraatiijiyadda ciyaartoy badan oo hadda loo heli karo Android.
Isgoyska Xayawaanka: Xerada jeebka oo hadda laga heli karo Google Play Store
Maalin ka hor bilowga rasmiga ah ee Nintendo's Isgoyska Xayawaanka, shirkadda Japan ayaa durbaba ciyaarta ka bilawday Play Store
Ku xidho khadka: Ciyaarta isku xidhka dhibcaha dib ayaa loo cusbooneysiiyey
Ku xidho khadka: Ciyaarta isku xidhka dhibcaha dib ayaa loo cusbooneysiiyey. Raadi wax badan oo ku saabsan kulankaan oo siinaya cabbir cusub oo isku xirka dhibcaha.
Maamulaha Kubadda Cagta Mobile 2018 hadda waa loo heli karaa Android
Maamulaha Kubadda Cagta Mobile 2018 hadda waa loo heli karaa Android. Waxbadan ka ogow ciyaarta SEGA ee aan ku maareyno koox dhan.
Ciyaaraha ugu wanaagsan DC Comics ee loogu talagalay Android
Afarta kulan ee ugu fiican DC Comics ee loogu talagalay Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan xulashadan cayaaraha ugu wanaagsan DC Comics ee aaladaha Android.
Pro Evolution Soccer 2018 hadda waa loo heli karaa Android. Raadi wax badan oo ku saabsan waxa ku cusub ciyaarta kubbadda cagta ee caanka ah.
Harry Potter wuxuu sidoo kale yeelan doonaa ciyaar xaqiiqda ah oo la kordhiyay oo loogu talagalay Android
Niantic wuxuu sii deyn doonaa xaqiiqda la kordhiyay ee ciyaarta Harry Potter. Raadi wax badan oo ku saabsan ciyaarta cusub ee istuudiyaha uu qorsheynayo inuu sii daayo sanadka soo socda.
Monument Valley 2 ayaa hadda loo heli karaa Android
Monument Valley 2 ayaa hadda loo heli karaa Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilawga ciyaarta moobiilka caanka ah ee hadda la heli karo maanta.
Ciyaaraha ugu fiican ee layaabka leh ee loogu talagalay Android
Kala soo bax xulashadayada cayaaraha ugu fiican Marvel Universe oo hadda loo heli karo aaladaha Android.
Super Mario Run ayaa la soo dejiyey 200 milyan oo jeer. Raadi wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka yar ee ay soo saarto inkasta oo ay ku guuleysato soo dejinta.
Ciyaaraha ugu qosolka badan Halloween ee loogu talagalay Android-kaaga
Tani waa soo-jeedinteenna ah cayaaraha ugu wanaagsan ee Halloween, ku baashaal zombies qaabab aan dhammaad lahayn. Cayaarahaas soo dejiso oo caajisi maysid.
Dhacdada Pokémon GO Halloween hadda waa la heli karaa
Dhacdada Pokémon Go Halloween hadda waa la heli karaa. Ilaa Oktoobar 31 waa fursad wanaagsan oo lagu raaxeysto wararka dhacdada.
5 codsi iyo ciyaaro si ay ugu raaxaystaan ​​Axadan
Buundada Oktoobar way dhammaatay laakiin barnaamijka 'Androidsis' waxaan dooneynaa inaan kugu dhiirrigelino xulitaankan codsiyada iyo cayaaraha aad ku raaxeysan doontid si buuxda
Gaaska ku garaac cayaaraha gawaarida ee Android
Haddii buundadan Oktoobar aad rabto inaad ku noolaato riwaayado, ha seegin xulashadan qaar ka mid ah ciyaaraha gawaarida ugu fiican ee loogu talagalay Android
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Final Fantasy ee loogu talagalay Android
Haddii aad tahay taageere taxanaha ciyaarta Final Fantasy, maanta waxaan kuu keenaynaa muunad yar oo wata qaar ka mid ah cinwaannada ugu fiican ee loogu talagalay Android
Haweeney da 'yar ayaa indho beeshay kadib markii ay ku ciyaareysay Honor of Kings muddo tobanaan saacadood ah taleefankeeda gacanta
Gabar 21 jir ah oo u dhalatay Shiinaha ayaa yeelatay indho la’aan ku meel gaar ah ka dib markii ay maalmo ku qaadatay taleefanka gacanta Honor of Kings.
5 ciyaarood iyo codsiyo ah in la sii daayo Isniinta rajo wanaagsan
Waxaan usbuucii cusub ku bilaabi doonnaa si weyn, xulasho weyn oo ah ciyaaro iyo barnaamijyo cusub si aan uga dhigno jiirada Isniinta mid fudud in la qaado
Batman: Cadawga Gudaha, oo hadda loo heli karo Android
Knight Dark wuxuu ku soo noqday Android. Waxaad hadda ka heli kartaa Batman: Cadawga ku dhex jira, iyada oo qaybta ugu horeysa ay bilaash ku tahay Play Store
Soo ogow 16ka kulan ee arcade ee ugu wanaagsan Android. Diyaar u noqo inaad joojiso hurdada oo ku baashaal sidaan oo kale hore xulashadan.
Ka bilow usbuuc cusub iyo bil cusub barnaamijka 'Androidsis' si aan uga dhigno Isniintaan mid adiga kuugu raaxeysata, waxaan kuu soo bandhigeynaa taxane ah ciyaaro iyo barnaamijyo cusub.
3 kulan yaanay seegin usbuucaan
Ka faa'iideyso dhammaadka usbuuca oo sahaminta saddexda kulan ee waxqabadka cusub, dagaalada iyo xiisaha aan kuu soo bandhigno. Diyaar ma tahay?
Int to the Dead 2 waxaa hadda kahor lagu dalban karaa Google Play
Hadda waad iska qori kartaa inaad ka mid noqotid kuwii ugu horreeyay ee dhinta 2, ciyaar badbaado zombie ah oo ku soo raran warar marka la barbardhigo tan koowaad.
Soddon sano kadib markii la sii daayay asalka, King's Knight wuxuu yimaadaa Android
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha fiidiyowga waxaad nasiib ku jirtaa maxaa yeelay King Knight-ka cusub: Cadhada Dragon Madoow ayaa horayba looga heli jiray Bakhaarka ciyaarta
Ciyaaraha cusub ee Android iyo codsiyada si rajo leh looga adkaado soo noqoshada ciidaha
Haddii aad hoos ugu dhacday natiijada dhamaadka fasaxaaga, iskuday kuwan ciyaartan iyo codsiyada cusub ee loogu talagalay Android waana hubaal inaad madadaalo leedahay
Square Enix ayaa ku dhawaaqday Final Fantasy XV: Pocket Edition ee casriga ah
Final Fantasy XV wuxuu mar kale sii ballaadhinayaa jiirayadiisa iyo Final Fantasy XV: Pocket Edition ayaa dhawaan lagu dhawaaqay qalabka Android iyo iOS iyo Windows 10.
Ciyaarta dagaalka "Tekken" ayaa dhowaan ku soo socota moobaylka
Tekken Mobile ayaa dhawaan la heli doonaa si looga soo dejiyo Google Play Store iyo Apple App Store. Waqtiga diiwaangelintu hadda waa u furan yahay adduunka.
Ku guuleysta abaalmarinno heer sare ah oo lala yeesho Husqvarna Spain iyo La Vuelta
Munaasabada 'Cycling Tour of Spain', barnaamijka 'Husqvarna Spain' wuxuu ku siinayaa ciyaar bilaash ah oo madadaalo leh oo aad ku guuleysan karto abaalmarino badan
Dino Chrome, ciyaar fiican oo Google ah
Dino Chrome waxay u timaadaa taleefannada casriga ah, dinosaur-ka Google Chrome markaan lumino isku xirnaanta Play Store ayaa hadda la heli karaa
Ciyaarta istiraatiijiga ah Titanfall: Weerarka hadda waa loo soo dejisan karaa Android
Titanfall Assault waa ciyaar istiraatiijiyad waqtiga dhabta ah u adeegsaneysa Android iyo IOS taas oo loo dejiyay isla koonka Titanfall.
Ciyaaraha iyo codsiyada lagu raaxeysto fasaxa
Laga soo bilaabo Androidsis waxaan kuu soo jeedineynaa codsiyo taxane ah oo kala duwan si aad uga faa'iideysato maalinta maanta oo kale habka aad ugu jeceshahay
Ka faa'iideyso casrigaaga casriga ah kulamadan qabow ee Android
Anagoo ka faa'iideysaneyna xaqiiqda ah in dhammaadka usbuuca uu durbaba yimid, waxaan kuu soo bandhigeynaa xulasho gaaban oo ay ku jiraan qaar ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan uguna xiisaha badan ee Android
Haddii aad caajiso oo aad rabto inaad isku daydo ciyaaro cusub, maanta waxaan soo jeedineynaa afar kaar oo xariif ah oo kaararka ah oo loogu talagalay Android, diyaarna u ah madadaalo?
Ku bilow fasaxaaga 5 kulan iyo codsiyo cusub oo loogu talagalay Android
Haddii aad raadineyso codsiyo cusub iyo ciyaaro aad ku raaxeysato xilliga fasaxa, maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa shan cinwaan oo cusub oo Android ah
Shimbiraha Xanaaqsan 2 waxay un dabaaldegeen sanadguuradoodii labaad oo ay u dabaaldegaan waxay bilaabeen Qabiilooyinka. Hadda waxaad la ciyaari kartaa taageerayaasha adduunka oo idil
Ku raaxayso dhamaadka usbuuca adoo ku sii deynaya ciyaaro cusub taleefankaaga casriga ah
Hadda oo dhammaadkii usbuucii yimid, waa wakhti ku habboon in la tijaabiyo ciyaaro cusub oo ku saabsan qalabkaaga Android, miyaad ku dhiirran tahay mid ka mid ah kuwan?
5 ciyaarood iyo codsiyo ah oo usbuuca lagubilaabo xamaasad
Waxaan ku bilaabeynaa usbuuca soo jeedin codsiyo cusub iyo ciyaaro loogu talagalay Android kaas oo aan ku bilaabi karno tamar iyo dhiirigelin
Qoraalka Da'da ah: Halyeeyada, ayaa hadda laga heli karaa Dukaanka Play
Kadib bilooyin sugitaan ah iyo ka dib markii lagu soo bandhigay kombuyuutarka bishii Maarso iyo kiniiniyada bishii Juun, The Elder Scrolls: Legends ayaa hadda loo heli karaa casriga casriga ah ee Android.
The emulators PSP ugu fiican ee Android
Maanta barnaamijka 'Androidsis' waxaan kuu soo bandhigeynaa xulasho yar oo ka mid ah kuwa ugu fiican emulators PSP si aad ugu raaxeysato ka ciyaarista taleefankaaga casriga ah ee Android
[APK] Emulator-kii ugu fiicnaa ee NES iyo 7 kulan oo halyeey ah
Halkaan waxaan kuugu keenayaa emulator-kii ugu fiicnaa oo lagu daray toddobo ciyaarood oo halyeey ah sida Super Mario 1, 2 iyo 3, DonkeyKong, Street Fighter ama Sonic.
Laad-bilow usbuuca kulamadan cajiibka ah ee Android
Waxaan bilaabeynaa usbuuc cusub waxaanan dooneynaa inaan kugu dhiirigelino inaad si buuxda ula timaadid soo jeedin ah cayaaro cusub oo Android ah oo kaa dhigi doona inaad ku qaadato waqtiyo xiiso badan
4 kulan oo xiiso leh oo lagu madadaalo isbuucaan
Bilow isbuucaan cusub si aadan u caajisin daqiiqad, waxaan soo jeedineynaa afar kulan oo cusub oo Android ah, madadaalo leh oo aad u balwad leh
4 ciyaar oo xiise leh Android si aad uhesho galab wanaagsan
Aniga oo ka faa’iideysaneyna xaqiiqda ah in aan ku jirno bartamihii isbuuca, maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa afar ciyaar oo madadaalo iyo madadaalo leh oo Android ah si aad u hesho galab wanaagsan
Ku billow usbuuca buuxa cayaarahan iyo codsiyadaas
Si aan usbuuca ugu bilawno lugta midig, waxaan kuu soo jeedineynaa taxane shan codsi iyo ciyaaro aanad ogaan karin laakiin aad jeclaan doontid
5 Nintendo DS emulators ee Android
Waxaan bilaabeynaa usbuuca u qoondeynta maqaal kuwa ugu caansan xulashada xulashada Nintendo DS emulators ee Android
Si aad si buuxda ugu raaxeysato toddobaadkan, barnaamijka 'Androidsis' waxaan kuu soo jeedineynaa liistada ciyaaraha xiisaha leh, ficilka, dagaalka, sirta iyo waxyaabo kaloo badan
Ciyaaraha Telltale waxay bilaabeen Minecraft: Sheekada Xaaladda Xilli 2, xilli ciyaareedkii labaad ee ciyaarta ugu xiisaha badan sanadka, hadda loo heli karo Android
4 ciyaarood oo xiise leh si loogu dabaaldego in maanta ay tahay Talaado
Maanta waa maalin la mid ah kuwa kale laakiin Androidsis waxaan dooneynaa inaan u soo jeedino afar ciyaarood oo xiiso leh si aad waqti fiican ugu hesho
5 kulan iyo barnaamijyo si usbuuca loo bilaabo bilow wanaagsan
Waxaan rabnaa inaad usbuuca ku bilowdid si wanaagsan waana taas sababta aan kuugu keenayno xul ah 5 kulan oo cusub iyo codsiyo aad ku raaxeysan karto
Pokemon Go wuxuu bilaabayaa dhacdo cusub munaasabada sanadguuradeeda markii la aasaasay
Ma waxaad ka mid tahay kuwa xiisaha u qaba Pokemon Go? Waxayba ka soo wareegtay muddo sanad ah markii ay bilaabantay maantana waxay bilawday dhacdo cusub oo shaki la’aan aad jeceshahay
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Android ee 2017: wareega koowaad
Bartamaha sanadka iyo bartamaha ciidaha, waxaan kuu sheegi doonaa sida liiska ugu wanaagsan ee ciyaaraha Android ee 2017 ay u socdaan si aad uhesho
4 ciyaarood si aad ugubilaawdo fasaxaaga si buuxda
Ka nasashadaada bilow bilow ah adigoo ku raaxeysanaya mid ka mid ah afartan kulan ee cusub ee Android: xiisaha, xiisaha iyo dahsoon
Waa ugu dambeyntii halkan, ugu dambeyntii jimicsiyada cusub ee Pokemon GO ayaa yimid, walxo cusub, qaab wadashaqeyn cusub. Maxaad sugeysaa inaad cusbooneysiiso?
Ciyaaraha caadiga ah ee 'SEGA' waxay u yimaadaan Dukaanka Play-ka bilaash!
Ma waxaad u xiisaynaysaa ciyaarahaas caadiga ah ee 'SEGA games' ee aad ku ciyaari lahayd oo keliya bixinta? Ka faa'iideyso inaad ku ciyaarto hadda, SEGA Forever waa aruurintaada.
Cusbooneysiin cusub oo Pokemon GO ayaa ka dhow sidii hore!
Ma waxaad sugeysay Niantic inay sii deyso cusbooneysiin kale si loo hagaajiyo khibradaada ciyaaraha? Ha sugin wax intaa ka badan maxaa yeelay hore ayaan uga haysannay dhexdeenna.
5 ciyaaraha Minecraft-ka ah ee loogu talagalay Android
Haddii aad jeceshahay inaad u ciyaarto Minecraft, maanta waxaan kuu keenaynaa shan kulan oo loogu talagalay Android oo leh makaanik aad isugu eg, ma iska diiwaangelisaa inaad tijaabiso?
Maanta barnaamijka 'Androidsis' waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho leh qaar ka mid ah cayaaraha ugu fiican Pokémon si aad ugu raaxeysato qalabkaaga Android
South Park: Taleefoonka wax baabi'iya wuxuu burburin doonaa mobilada kahor dhamaadka sanadkan
South Park: Telefoonka baabi'iyaha waa ciyaar cusub oo ku saleysan koonka taxanaha South Park oo ku imaan doona telefoonada Android ka hor dhamaadka 2017.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee aan freemium-ka ahayn ee loogu talagalay Android
Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa xulasho leh qaar ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee aan freemium-ka ahayn ee loogu talagalay Android: bixi hal mar oo kaliya kuna raaxee inta aad rabto
Minecraft waxay ku dhawaaqday mid ka mid ah cusbooneysiinteeda ugu weyn
Microsoft waxay ku dhawaaqeysaa cusbooneysiinta wadajirka ah ee xagaagan ee Minecraft, mid ka mid ah cusbooneysiintii ugu weyneyd ee abid loo sii daayo ciyaarta
Ku ciyaarida Pokémon Go waxay faa'iido u yeelan kartaa caafimaadkaaga
Daraasad caafimaad oo dhowaan la soo gabagabeeyay ayaa ah in ciyaarta Pokémon Go ay faa iidada u leedahay caafimaadka iyadoo kor u qaadeysa dhaqdhaqaaqa jirka ee ciyaartoyda
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan Android ee bisha May 2017
Anagoo ka faa'iideysaneyna Axadda iyo imaatinka dhammaadka bisha, waxaan kuu soo bandhigeynaa qaar ka mid ah kulamada ugu wanaagsan ee cusub ee loogu talagalay Android ee yimid May 2017
Ciyaaraha VR-ka ugufiican ee looga faa'iideysto Google CardBoard-kaaga
Maanta waxaan soo jeedineynaa xulasho leh qaar ka mid ah cayaaraha VR ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android, khibradaha dhabta ah ee dhabta ah si aad ugu raaxeysato Kaadhka Google
5ta emulators ee ugu wanaagsan ee PlayStation ee Android
Ku kalsoonow qaar ka mid ah waayo-aragnimadaadii ugu fiicneyd xulitaankan kuwa ugu fiican emulators-ka PlayStation ee aaladaha Android
Waxaad hadda ka soo dejisan kartaa Architectka Xabsiga Play Store
Ciyaarta caanka ah ee la amaanay ee loo yaqaan 'Prison Architect' ayaa hadda loo heli karaa qalabka mobilada ee Google Play Store ee loogu talagalay Android
5 kulan oo khafiif ah dhammaadka wiigga
Marka usbuuca dhammaadkiisu soo dhowaado, waxaan soo jeedineynaa shan su'aal oo xiiso leh oo aan ka jawaabno cayaaraha si aan ula raaxaysanno asxaabta
Ciyaaraha ugu fiican FPS ee loogu talagalay Android
Maanta waxaan kuugu soo bandhigeynaa barnaamijka 'Androidsis' xulasho leh qaar ka mid ah FPS Ciyaaraha Ragga Koowaad ee ugu wanaagsan qalabka Android
Ciyaaraha TOP 6 ee loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jira. (Iyo kuwa aan aadka u yareyn)
Halkan waxaad ku haysaa kulankaan TOP 6 ee Android oo si gaar ah loogu talagalay kuwa yaryar ee guriga ku jira iyo kuwa naga mid ah ee aan aad u yareyn.
Ciyaaraha ugu wanaagsan Temple Run ee Android
Maanta waxaan kuu keenaynaa soo jeedin qaab-dhismeedka Temple Run-style ah oo loogu talagalay Android, cayaaraha orodyahannada aan dhammaadka lahayn ee ay tahay inaad ka leexato caqabado badan
Sims Mobile, waa nooc cusub oo jilista caanka ah
Farshaxanka elektaroonigga ah ayaa bilaabaya nooc ka mid ah The Sims for Android, kaas oo ay si dhab ah u rajeynayaan inay ku guuleystaan ​​qaybta ciyaaraha moobiilka.
Nintendo wuxuu ka shaqeynayaa cinwaanka Legend of Zelda ee taleefannada casriga ah
Shirkadda ciyaarta fiidiyowga ee Japan Nintendo waxay ka shaqeyneysaa cinwaan ah Halyeeyga Zelda saga ee qalabka mobilada
5 kulan Android ku saleysan jilayaasha aad ugu jeceshahay
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa muunad yar oo ka mid ah ciyaaraha ugu wanaagsan ee Android iyadoo lagu saleynayo jilayaasha taxanaha aad ugu jeceshahay
Summadaha Promo waxay u yimaadaan Pokémon Go for Android
Ciyaartoyda Pokémon Go ee Android waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan lambarrada ogeysiiska si ay ugu soo furtaan iyaga oo ku beddelaya waxyaabo bilaash ah ciyaarta.
Shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday daahfurka ciyaaraha caalamiga ee Messenger
Ciyaaraha degdega ah ee loogu talagalay Facebook Messenger kuma sii koobna kaliya Mareykanka oo hadda adduunka oo dhan ayaa laga heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha.
Kulamada ugu wanaagsan ee kulamada qabiilooyinka ee loogu talagalay Android
Haddii aad jeceshahay ciyaaro ku saleysan dhismaha boqortooyooyinka qaabkii loo yaqaan 'Clash of Clans', maanta waxaan soo jeedinaynaa qaar ka mid ah cinwaannada ugu fiican.
14 barnaamijyo iyo ciyaaro bilaash ah ama iib ah wakhti xaddidan
Soo dhaqso oo ka faa'iideyso dalabkan barnaamijyada bilaashka ah ama qiime jaban iyo cayaaraha ku yaal Play Store ee Android
Ciyaaraha istaraatiijiyada ugu fiican ee loogu talagalay Android
Maanta Androidsis waxaan soo jeedineynaa xulasho istiraatiijiyadeed oo loogu talagalay Android. Tabobari maskaxdaada maxaa yeelay waad u baahan doontaa
Waxaad hadda ka ciyaari kara Pictionary on your Android
Ciyaarta caanka ah ee caanka ah ee loo yaqaan 'Pictionary' hadda wuxuu leeyahay nuuca ay ku shaqeynayaan aaladaha mobilada ee Android iyo iOS, miyaad ku dhiiran kartaa inaad ciyaarto toddobaadkan?
"Riven, taxanaha Myst", ayaa hadda loo heli karaa Android
Hadda waxaa laga heli karaa Play Store Riven, taxanaha Myst, ee loogu talagalay Android, sii wadida ciyaarta xiisaha leh ee guusha leh
[APK] Emulator-kii ugu fiicnaa ee Nintendo Classic oo watay tanno badan oo ciyaaro la soo raray ah. (Supermario 1,2,3, Dameer Koong, Double Dragon iyo kuwa kaloo badan)
Halkan waxaad ku haysaa apk-ka ugu fiican emulator-ka 'Nintendo Classic emulator' ee loogu talagalay Android, emulator-ka kaas oo ka buuxa ciyaaro bilaash ah oo bilaash ah.
Qaylada digaagga, ciyaarta digaagga ee lagu xakameeyo codkaaga oo ku garaacaya Android
Maanta waxaan kuu keenay Qaylada Digaagga, ciyaarta digaagga ee codkaaga lagu xakameeyo ee ku garaacaysa Android ee ah buunbuuninta dhammaan shabakadaha bulshada.
Ciyaarta Guy-ga cusub ee loogu talagalay Android hadda waa la heli karaa
Ciyaarta cusub ee Guy-ga, Qoyska Guy: Freakin Mobile Game, waxaa hadda loo heli karaa sidii bilaash ah oo laga soo dejisan karo Dukaanka Play
Nonstop Chuck Norris, oo hadda loo heli karo aaladaha Android
Nonstop Chuck Norris waa ciyaar ficil cusub oo ku saleysan jilaaga caanka ah iyo khabiirka ku takhasusay fanka dagaalka ayaa hada diyaar u ah Android
Ciyaarta caanka ah ee loo yaqaan 'Prison Architect' ayaa loo heli doonaa Android
Daabacaha iyo soo-saaraha ciyaarta caanka ah ee loo yaqaan Prison Architect ayaa ku dhawaaqaya inay ka shaqeynayaan nooc ka mid ah kiniinka Android
Afterpulse hadda waa la soo dejin karaa oo lagu ciyaari karaa Android
Soo dhaweyn wanaagsan kadib iOS, Afterpulse hadda waa la soo dejin karaa oo lagu ciyaari karaa Android. Waxaan kuu soo bandhigeynaa ciyaarta nooca toogashada ah ee kaa madadaalin doonta saacado.
Maanta barnaamijka 'Androidsis' waxaan soo jeedineynaa qaar ka mid ah waxa noqon kara kulamada badbaadada ee ugu wanaagsan Android, waxaan sugeynaa soo jeedimahaaga
5 kulan oo mobilo ah oo aad ka ciyaari karto biraawsarkaaga internetka
Haddii aadan dooneynin inaad ku dhejisid ciyaaraha boggaaga Android, waxaan ku tusineynaa 5 ciyaarood oo aad u fiican oo aad si toos ah uga ciyaari karto biraawsarkaaga internetka.
Ciyaaraha halxiraalaha ugu fiican ee loogu talagalay Android
Maanta barnaamijka 'Androidsis' waxaan ku soo bandhigeynaa xulashada qaar ka mid ah cayaaraha xujada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android si maskaxdaadu u shaqeyso
Pokémon GO wuxuu si dhakhso leh u sii deyn doonaa hab iskaashi badan oo iskaashi leh
Istuudiyaha hormarinta Niantic wuxuu ku dhawaaqay in qaab iskaashi badan oo wada shaqeyn ah Pokémon GO uu imanayo guga.
Fan of legdinta iyo ciyaaraha? Adigu isku kalsoonow, Sega wuxuu ku dhawaaqay WWE Tap Mania ee Android
Sega iyo WWE waxay heshiis wada galeen si ay u bilaabaan WWE Tap Mania, oo ah ciyaar legdinta cusub ee loogu talagalay Android dhamaadka sanadka
Da'da Boqortooyooyinka: Castle Siege, oo hadda loo heli karo Android
Ka dib markii ugu horreysay ee 2014, ciyaarta istiraatiijiyadeed ee Da'da Imbaraadooriyadeed: Castle Siege ayaa ugu dambeyntii loo heli karaa dadka isticmaala Android.
Da'da Boqortooyooyinka: Castle Siege hadda waa la soo dejin karaa oo lagu rakibi karaa Android. Microsoft ayaa ugu dambayntii ciyaarta ka sii daysay Play Store ka dib dib u dhac kooban.
Chameleon Run, waa ciyaar aan caadi aheyn oo hadda bilaash ku ah Play Store
Tartanka Chameleon waa ciyaar orod qurux badan oo la yaab leh oo aan xad lahayn oo aad hadda si buuxda u heli karto bilaash wakhti xadidan
Ciyaaraha tartanka ugu fiican ee loogu talagalay Android
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha, gawaarida iyo xawaaraha, maanta waxaan kuu keenayaa xulasho ay la socdaan qaar ka mid ah ciyaaraha tartanka ugu fiican ee loogu talagalay Android
Shaki la'aan, Nintendo wuxuu Super Mario ku dilayaa orodyahankan aad kaliya ka walwalsan tahay uruurinta lacagta birta ah. Si fudud niyad jab.
Halkan waxaad ku haysaa xiriiriye si aad u soo dejiso oo aad u rakibto Super Mario Run ee loogu talagalay Android, in kasta oo Google Play Store uu kuu sheegayo in terminaalkaagu aanu la jaan qaadi karin.
Nintendo wuxuu horey u shaaciyay taariikhda rasmiga ah ee Super Mario Run loogu talagalay Android: waxay noqon doontaa Arbacada soo socota, Maarso 23, aduunka oo dhan
Hadda waxaad ka ciyaari kartaa goblins-ka caanka ah ee Ghosts'n mobilkaaga Android
Nooca Android ee nooc kale oo casri ah oo loo yaqaan 'Arcade classic', Ghosts'n Goblins, ayaa horeyba ugu jiray Bakhaarka Dukaanka, iyadoo lagu qiimeeyay 1 euro.
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee turubka iyo barnaamijyada loogu talagalay Android
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha kaararka iyo shucuurta xoogga leh, maanta waxaan kuu keenaynaa xulasho ay la socdaan qaar ka mid ah barnaamijyadooda ugu fiican iyo ciyaaraha turubka ee loogu talagalay Android
1942 Mobile, nooca mobilada iyo kaniiniga ee ciyaartan diyaaradeed ee caadiga ah ee uu sii daayay Capcom sanadkii 1984, ayaa haatan lagu ciyaari karaa Android.
Qoraallada waayeelka: Halyeeyada waxaa laga heli doonaa aaladaha Android
Bethesda waxay ku dhawaaqday Ciyaarta Caanka ah Buugga waayeelka: Halyeeyada u imanaya Qalabka Android Iyadoo Lagu Xusay Astaamo Cusub oo Badan
Saddex siyaabood oo kala duwan oo loogu iibsado barnaamijyada iyo ciyaaraha Google Play Store
Casharka aasaasiga ah ee Android kaas oo aan ku tusayo sida loo xoojiyo habka lacag bixinta ee Dukaanka Play-ka iyo sidoo kale saddexda hab lacag bixin ee ay taageerto Google.
Ciyaarta Shadowmatic, oo ah guul weyn oo ku saabsan IOS, ugu dambeyntii waxay ku timid Android
Ciyaarta Shadowmatic, oo ku dhufatay macruufka, ayaa ugu dambeyntii ku soo socota Android. Baro ciyaartan xujada xariifka ah adoo si bilaash ah ugu ciyaaraya heerarka ugu horeeya.
Ku dheji ciyaarta xujada aragtida aan macquul ahayn
Hocus waa ciyaar xujo ah oo loogu talagalay Android oo leh aragtiyo iyo aragti aan macquul ahayn oo caqabad dhab ah ku noqon doonta maskaxdaada.
Google wuxuu ku dhawaaqay 4 ciyaarood oo cusub oo VR ah oo loogu talagalay Daydream
Google wuxuu ku dhawaaqayaa imaatinka soo socda ee afar ciyaarood oo dhab ah oo muuqaal ah oo loogu talagalay barnaamijka 'VR Daydream' iyo aaladdiisa astaanta u ah
5 kulan indie cusub oo weyn oo Android ah
Toddobaadyadan la soo dhaafay waxaan helnay imaatinka taxane cusub oo ah ciyaaraha indie-ka ee Android oo adeegsanaya tayo sare iyo gameplay weyn
Matt Groening si uu u sii daayo ciyaar cusub Futurama ee loogu talagalay Android
Futurama: Dunida Berri waxay noqon doontaa ciyaarta cusub ee loogu talagalay Android iyada oo lagu saleynayo taxanaha taxanaha ah ee caanka ah ee kooxda asalka ah ee isku midka ah ay soo faragelinayaan
5 farshaxanno indie ah oo fiidiyoow ah oo ku saabsan Android
Qalabkaaga Android waxaad awood u leedahay inaad ku hesho 5 farshaxanno heer sare ah oo fiidiyow ah si aad ugu raaxaysato tayo wanaagsan.
Bethesda waxay durbaba ka shaqeyneysaa ciyaar cusub oo moobiil ah oo aan ka aheyn Hoyga Fallout
Ka dib markii la sii daayay Hoyga Fallout iyo Bethesda Pinball, istuudiyaha caanka ah ee fiidiyowga ciyaarta ayaa durbaba horumarinaya ciyaarta wareega ee soo socota.
Postknight waa ciyaar door-ciyaar fiican ah oo aad ku raaxeysan doonto in ka badan intaad moodeysay
Postknight waa ciyaar fiidiyoow RPG ah oo sifiican loo sameeyay oo leh naxariis badan. Waxyaabaha laga dheehan karo ciyaartii ugu horreysay oo awood u leh inay nagu wareeraan.
Haddii aad rabto inaad noqoto qofka xun in muddo ah ee Gotham City, Batman: Arkham Underworld waa habka ugu fiican ee lagu sameeyo taleefankaaga casriga ah.
Waxaan ku tusineynaa khiyaanadan Pokemon Go kaas oo aad ku qasbi karto isbedelka Evee-kaaga Espeon, Umbreon, Flareon, Vaporeon ama Jolteon. Khiyaanada sharciga ah!
Rucoy Online waxay kusocotaa inay noqoto MMORPG
Haddii aad raadineyso MMORPG on Android, Rucoy Online ayaa ku siin kara dhammaan dareenkaas lumay sannadihii la soo dhaafay oo laga helay ciyaar mobilo ah.
Cuevas Online waa orod aan dhammaad lahayn oo aadan waligaa dareemi doonin kaligaa
Cuevas Online wuxuu ku ciyaaraa ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ku dhex mara orod aan dhammaad lahayn oo leh aalado badan iyo daraasiin ciyaartoy ah oo shaashadda ku jira
Muddo sanad ah gudahood, Clash Royale wuxuu awooday inuu 1.000 milyan oo doolar ugu daro qasnadda Supercell oo uu sidaas uga badiyo Clash of Clans
2 ciyaaro caadi ah oo kugu dhejin doona
Waxaan kula soo laabaneynaa labo kulan oo aan caadi aheyn oo kaa soo jiidi doona kulanka ugu horeeya, mid caqli gal ah kan kalena xirfad ku saabsan qaabka ugu fiican ee Flappy Bird.
Jiilka labaad ee Pokémon ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay isbuucaan
Toddobaadkan waxaa jiri doona chicha badan oo loo qaybiyo jiilka labaad ee Pokemons ee yimaada Pokemon GO sida ku cad xaqiijinta rasmiga ah.
Halyeeyada Astaanta Dabka ayaa cusbooneysiiya muddadeeda gunnada waxayna ku dareysaa khibrad dheeri ah
Halyeeyada Astaamaha Dabka ayaa hada ku dhawaaqay taxane ah astaamo cusub oo abaalmarin ah si loo sii wado qaar ka mid ah gunnooyinka la bilaabay maalinta koowaad
Isbedelada Bethesda Pinball, ciyaar RPG ah oo wax badan ka badan indhaha
Marka jaleecada hore Bethesda Pinball ay umuuqato kubbadda loo yaqaan 'pinball', waxay leedahay walxo RPG ah oo qiime aad u qiimo badan leh laguna raaxeysanayo muddo dheer miisaskeeda.
Falanqaynta Bethesda Pinball, waa sharad kale oo weyn oo ka socota istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ee xiisaha leh
Bethesda waxay mar kale noo muujinaysaa inay ogtahay sida loo sameeyo ciyaaro aad u wanaagsan, in kasta oo Bethesda Pinball-kani uu xulafo la ahaa Zen Studios.
Pixel Craft waa meel toogasho ah 'em oo leh pixels badan iyo qaraxyo pixelated
Farshaxanka 'Pixel Craft' waa toogasho muhiim ah oo leh pixels badan oo adeegsada farshaxanka 'pixel art' si uu ula ekaado madaxda waaweyn ee kama dambaysta ah
U adeegso mutantiga la ugaarsado sida waxyaabaha ugu wanaagsan ee Taco ee Gunman Taco Truck
Qabo gaarigaaga, kari wax badan oo tacsida ah isla markaana ku dhiira gal jidadka waawayn ee adduunka oo ay burburiyeen dhacdooyinkii nukliyeerka ee ka tagay dad badani.
Halxiraalaha Hal-xidhaalaha xiisaha & Sheekooyinka waa RPG lagu mannaystay wanaagyo waaweyn
Tiles & Tales waa ciyaar fiidiyow cusub oo xujo leh oo leh walxo RPG ah iyo dagaal salka ku haya oo kaa yaabin doona tayadiisa sare.
Dad badan oo gawraca zombies ah Zombie Age 3
Dila kumanaan zombies ah Zombie Age 3, ciyaar arcade ah oo noo geyn doonta daabacaadda seddexaad ee xayeysiinta yar ee moobiilka.
Qabriga maaskarada ayaa kaa hor mariya labyrinth iyada oo loo marayo ciyaar weyn
Haddii aad raadineyso qunyar socod ah, arcade cabsi leh, Qabriga Maska waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aan soo kordhinay bilihii la soo dhaafay.
Bethesda Pinball wuxuu kugu kaxeeyaa jawiga cayaaraha aad jeceshahay
Bethesda Pinball waxay ka dhalatay xiriirka Zen Studios si ay noogu keento kubbadda pinballka oo aad ka sahamin karto adduunyada cayaaraha shirkadda.
Pokémon Go wuxuu u rogayaa casaan Maalinta Jacaylka
Niantic wuxuu ku dhawaaqayaa dhacdadiisii ​​ugu horreysay ee 2017 iyo dharka Pokémon Go oo casaan ah si loogu dabaaldego Maalinta Jacaylka warar badan oo aadan diidi karin
Jabsiga weyn 'n slash RPG ee qaabka Diablo oo leh Bladebound
Diablo wuxuu sii wadaa inuu noqdo mid kamid ah ilaha dhiirrigelinta daraasiin ciyaarood ah oo isku dayaya inuu ugu dhawaado dhanka ciyaarta iyo weynaanta muuqaalka.
Warshadda Xun waxay ku geyn doontaa ciyaar arcade retro ah oo aad la socoto madax aad u adag
Warshadda sharka ama Warshadda Xun ayaa kaa sugeysa Google Play Store si aad ugu raaxeysato heerarkeeda, dib u dhackeeda iyo madaxdeeda ugu dambeysa.
Dandy Dungeon waa RPG-ga ugu xad-dhaafka badan ee loo waxyooday Don Quixote de la Mancha
Haddii aad raadineysid RPG kaa qoslaya oo kaa tagaya "freaking out", Dandy Dungeon waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee lagu daro nooca sannadihii la soo dhaafay.
Star Wars: Foce Arena waa MOBA oo ku geyn doonta inaad dareento dhinaca iftiinka xoogga
Star Wars: Force Arena wuxuu ku dhow yahay inuu noqdo MOBA leh dhamaan astaamaha halyeeyada ah ee ka soo jeeda sheekooyinka khayaaliga ah ee sayniska ugu caansan.
Astaanta Dabka: Halyeeyada, RPG oo leh qadar weyn oo istiraatiijiyad ah oo ka timid Nintendo weyn
Nintendo wuxuu keensadaa Astaanta Dabka: Halyeeyada si gaar ah ugu shaqeeya Android oo ah istiraatiijiyad RPG ciyaarta oo leh dhinacyo xiiso leh
Nintendo's Astaanta Dabka: Halyeeyada hadda waa loo heli karaa Android
Ciyaarta labaad ee Nintendo ayaa hada diyaar u ah soo dejinta sida lagu tilmaamay. Maanta Febraayo 2 waxaad ciyaari kartaa Astaanta Dabka: Halyeeyada
Pokémon GO wuxuu dhaafey tirada 1.000 milyan oo dakhli ah
Pokémon GO wuxuu horey u haystay rikoor kale hoosta suumanka tanina waa ciyaarta ugu dhaqsaha badan ee lagu gaaro tirada dakhliga oo ah $ 1.000 bilyan
Resident Evil 4 Mobile Edition, ama goorta ciyaarta moobiilku ka imaan karo PS2
Haddii aad tahay qof nostalgic ah oo sheekada 'Resident Evil saga' ay ku dhacday wax yaab leh, wax walba waa arrin raadinta Resident Evil 4 Mobile Edition oo la iibsanayo.
Super Mario Run ayaa sii wadaya inuu jebiyo rikoorrada ku jira soo degsashada, laakiin beddelaadda waxay aad uga fog tahay qiyaastii hore ee shirkadda Japan
Nintendo waxay dib u dhigeysaa sii deynta Xayawaanka
Nintendo waxay ku dhawaaqday in Isgoyska Xayawaanku dib udhac ku yimid bilowgiisii, markaa waa inaan sugnaa in yar oo dheeri ah si aan u helno ciyaartan fiidyowga ah.
Hada waad dhageysan kartaa muusikada intaad ugaarsaneyso Pokémon GO
Pokémon GO waa la cusbooneysiiyay iyadoo awood u leh dhageysiga muusikada aad jeceshahay inta aad ciyaareyso ciyaarta casriyeyntii ugu dambeysay ee Android.
Pokémon GO wuxuu heli doonaa Gen 2 Pokémon badan Maalinta Jacaylka
Maalinta Jacaylka 'Niantic Labs' waxay leeyihiin taxane cusub oo bahal Pokémon GO Gen 2 oo diyaar ah sidaan maanta ognahay.
Laga soo bilaabo abuuraha halyeeyga Might iyo Magic wuxuu ka yimaadaa Abuurista Quwada illaa Android
Abuuraha Might iyo Magic wuxuu doortay Android wuxuuna na keenayaa Abuurista Quest, kaar la ururin karo oo RPG ah oo leh qayb istiraatiiji ah.
Maamul rugtaada caafimaadka ee Isbitaalka My, oo ah jilid tayo sare leh oo cusub
Qabille kale oo ah qaabka Hay Day iyo Farmville oo leh Isbitaalkeyga, in kasta oo kan aad u baahan tahay inaad wax ka qabato socodsiinta xarun caafimaad oo dhan.
Ugaarsada oo la dagaallama 'Wolf', iskaashato badan oo iskaashi leh oo aad yeey ku tahay
Haddii aad raadineyso inaad isu beddesho yey, haka daahin inaad ciyaartid The Wolf, oo ah ciyaar aad u khaas ah oo ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ku ciyaaraan.
Orodka iyo ku boodka inta u dhexeysa buuraha dhaadheer weligood kuma raaxaysan sida Sky Dancer
Sky Dancer waa orodyahan aan dhammaad lahayn oo adeegsada adduunyo yar oo 3D ah oo leh soo jiidasho gaar ah iyo muuqaallo qurux badan
Life Rogue waa RPG arcade shootali oo leh taabasho orod leh oo aan dhammaad lahayn oo dhalaalaya
Nolosha Xadgudbayaasha ah waxay isku dhejisaa sida qofna uusan aheyn orodyahanka, toogashada iyo RPG. Mid aad u gaar ah oo dhan-in-mid tayo sare leh.
Tubada Titans 2 waxay laabanaysaa lasocodyo badan, verve iyo titan badan
Taabashada Titans 2 waa qaybta xigta ee guji caan ka ah laba sano ka hor oo ku soo noqota iyada oo leh xoog badan, xoog badan iyo cadaw badan oo laga adkaado.
Ninja Spinki waa midda cusub ee ka timid abuure Flappy Bird
Abuuraha Flappy Bird wuxuu la soo noqdaa Ninja Spinki, waa ciyaar cusub oo Retro caadi ah oo aad la macaamili doonto makaanikada ciyaarta kala duwan.
Pokémon Duel, waa ciyaar cusub oo balanqaadaysa inay noqon doonto mid balwad leh
Waxaa jira ciyaar cusub oo Pokémon ah oo loogu talagalay Android: Pokémon Duel. Waxaa kaliya loo sii daayay Mareykanka laakiin APK-kiisa waa la soo dejin karaa, la gelin karaa laguna ciyaari karaa Ingiriis.
Da'da Boqortooyada: Castle Siege, ciyaar kale oo ku soo socota Android bisha Maarso
Da'da Boqortooyooyinka: Castle Siege waa ciyaar istiraatiijiyad ah oo hadda loo heli karo dhuftoyada kale ee imanaya Android bisha Maarso 2017.
Intuiton, ciyaarta su'aasha iyo jawaabta ayaa kugu soo jiidi doonta
Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigo ciyaar cusub oo loogu talagalay Android, ciyaar su'aal iyo jawaab ah oo magaca Intuiton hoostiisa hubaal kugu xidhi doonta.
Rajo Farxad leh: Kawaii Jump ama 'cute' oo lagu sameeyay ciyaar Miimos badan
Miimos-ku waa xayawaanada waaweyn ee xayawaankan loo yaqaan 'Happy Hop: Kawaii Jump' taasna waxay u taagan tahay midabbadeedii hore.
Yobot Run waa mid hagaagsan oo aan dhammaad lahayn oo orodyahan leh heerar heerar gacmeed loogu talagalay
Haddii aad raadineyso madal heerarku gacanta lagu abuuray, Yobot Run waa ciyaarta ay tahay inaad hadda rakibto.
Chillingo waxay daabacdaa WarFriends, toogasho tayo leh oo aad wajihi doonto ciyaartoy kale
Chillingo waxay daabacday WarFriends, ciyaar iskaashato badan oo iskaashi leh oo la mid ah Clash Royale oo adeegsata 3D iyo ciyaaraha frenetic.
Soul Knight waa toogasho tayo sare leh oo gurguurta oo gurguurta oo leh tallaallo badan
Haddii aad raadineyso ciyaar nacasnimo u eg oo aad wax badan ku dhiman doontid oo aad si aan kala sooc lahayn u sameysan godod god ah, Soul Knight waa midka.
Shirkadda Nintendo waxay ku dhawaaqeysaa in Super Mario Run laga heli doono Play Store-ka loogu talagalay Android bisha Maarso oo dhan
Nintendo si gaar ah u sii daayo Astaanta Dabka: Halyeeyada ku jira Android 2da Febraayo
Astaanta Dabka: Halyeeyada, Nintendo ee ciyaarta fiidiyowga cusub, ayaa si gaar ah loogu sii deyn doonaa Android bisha Febraayo 2.
Pokémon GO wuxuu gaadhay $ 800 milyan oo dakhli ah waqtiga rikoorka
Pokemon GO wuxuu gaadhay $ 800 milyan oo dakhli ah waqtiga rikoodhka wuxuuna katagay tartamayaasha tooska ah sida Clash Royale.
Samurai Saga waa mid si xawli ku socda u shaqeeya
Samurai Saga waa ciyaar fiidiyow ah oo xawaare sare leh halkaas oo dagaalka, boodka, iyo awoodaha dagaalyahanada samurai ay abuuraan iskudhaf weyn.
Ku soo celi digaagga quruxda badan Cluckles, oo ah mashiin ku shaqeynaya dhib badan
Cluckles waa madal madadaalo leh oo dhakhso leh oo leh heerar farsamo gacmeed oo aad ku caawin karto digaag geesinimo leh.
Ku tuur dhabarkaas xoogga leh una horseed qofka kaa soo horjeeda inuu cuno wasakhda Ban Ban Tennis
Haddii aad raadineyso ciyaar tennis oo aad la ciyaarto multiplayer maxalliga ah, Bang Bang Tennis waa mid ka mid ah sharadyada ugu fiican ee aad hadda ku haysato Android.
Ciyaaraha Ketchapp waxay markale nagula tartamayaan Jumpy, oo ah madal cabsi badan
Ciyaaraha Ketchapp waxay dib ugu soo laabanayaan dagaalka iyagoo wata madal aan baqdin laheyn oo awood u leh inay soo saarto heerar gebi ahaanba aan kala sooc lahayn.
Burburi nidaamka kujira Hacker-ka 2.0 a la Deux Ex GO
Hacker 2.0 waa wax badan oo la mid ah taxanaha 'GO' ee ka socda Square Enix si uu kuu hor dhigo waxa ay u eg tahay inuu noqdo hacker dhab ah oo ay tahay inuu jebiyo nidaamka.
Maareynta alwaaxyada kala duwan ee leysarka iyo muraayadaha si aad u xalliso xujooyinka loo yaqaan 'Sky'
Cirka dhexdiisa waa halxiraal aad ku qasban tahay inaad ku maareysid muraayadaha iyo dhowr dogob oo ileyska leysarka si ay ugu midoobaan midabka walxaha bartilmaameedka ah.
2 ciyaarood oo xamaasad leh oo ka yimid horumariyeyaasha Isbaanishka
Maanta waxaan kuu keenayaa 2 ciyaarood oo xamaasad leh oo aad jeceshahay, waxaa abuuray Zombie Brothers laba horumariye Isbaanish ah oo si adag u shaqeeya.
Castle Creeps waa difaac munaarad tayo sare leh oo cusub
Castle Creeps waa difaac munaarad cusub oo keenaya wax kasta oo ka dhigay nooc ka mid caan ah: geesiyaal, munaarado iyo tayo farsamo oo weyn.
Ku afuufa cadawga Blastz Blitz, sheydaan adag oo ah 'Bomberman'
Haddii aad raadineyso isugeyn qalaad oo udhaxeysa cayaaraha kala duwan, sida Wadooyinka Crossy iyo Bomberman, Blast Blitz ayaa jawaab u ah.
Dash Quest, oo ah orodyahan aan dhammaad lahayn oo RPG ah oo aad ka heli doonto madaxdii ugu dambeysay iyo wax ka badan
Dash Quest waa ciyaar fiidiyoow ah oo RPG ah oo qiimo weyn u leh sababo taxane ah oo ka dhigaya mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan bilihii la soo dhaafay.
Naqshadee rover kuu gaar ah si aad u sahamiso dusha sare ee Dayaxa
Raadiyaha Lunar waa ciyaar fiidiyoow ah oo aad u xeel dheer oo aad u baahan doonto inaad naqshadeyso rover kuu gaar ah si ay u sahamiso dusha sare ee dayaxa.
Dhamaan 6-da kulan ee loo yaqaan 'Mega Man Mobile Mobile' waxay ku yaaliin midkiiba 1,99 XNUMX
Maanta waxaad ka iibsan kartaa mid kasta oo ka mid ah lixda ciyaar ee loo yaqaan 'Man Man Mobile Mobile' ee ku jira Android for 1,99 marka Capcom ay ku soo saaraan iyaga Play Store.
Little Fox waa orodyahan aan dhammaad lahayn oo leh muuqaal muuqaal aan caadi ahayn iyo dhibaato sheydaan
Haddii aad jeceshahay ciyaaro adag oo aad leedahay daaweyn muuqaal oo weyn, The Little Fox waa ciyaar fiidiyoow ah oo ay tahay inaad ciyaarto.
Retro City Rampage DX waxay kugu xujeyneysaa adduunkeeda furan, naqshadeynta retro iyo nuuxnuuxsiga 80s
Laga soo bilaabo Steam wuxuu ka yimaadaa Retro City Rampage DX cajiibka ah casrigaaga Android si aad ugu sahamin karto adduunkeeda furan oo dhan qaab magaalo.
Top 30 Android Video Games ee 2016
Sanadka 2016 ayaa naga tagaya oo wata taxaneyaal fara badan oo tayo sare leh oo naga dhigaya inaan sannadkan si gaar ah u xusno.
Ookujira ama nibiriga yaabka leh ee weyn ee ay tahay inuu ka badbaadiyo aadanaha shisheeyaha
Ookujira waa ciyaar fiidiyoow aad u qaas ah sababta oo ah sheekada cajiibka ah ee na geynaysa shaashadda taleefanka casriga ah si aan u noqonno goob.
Hadda waad isdiiwaangalin kartaa inaad noqoto kan ugu horreeya ee soo dejiya 6 video-ga Man video
Mega Man wuxuu sameyn doonaa guul soo laabasho ah bilowga sanadka soosocda. Isdiiwaangeli boggooda si aad u noqotid kan ugu horreeya ee soo dejiya
Square Enix's Dragon Quest taxane ayaa hoos loo dhigay 40% Google Play Store
Haddii aad jeceshahay RPG iyo in ka badan haddii ay ka timaaddo Japan, Square Enix's Dragon Quest saga ayaa la heli karaa hadda iibka maalmahan.
Hadda waad iska qori kartaa Super Mario Run ee Google Play Store
Laga bilaabo maanta Super Mario Run waxaa horeyba looga heli karaa Google Play Store si aad isu diiwaangeliso waadna kala soo bixi kartaa laga bilaabo xilliga ay shaqeyneyso.
Waxaan ciyaareynaa midka ugu caansan Geometry Dash, Joomateri Dash World iyo Joometri Dash Meltdown
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa ciyaar ciyaar si aad u aragto tan ugu cusub ee Joometri Dash, ciyaartii jabisay dhammaan diiwaanadii soo dejinta ee Android.
Iyada oo ku saleysan suufka waxaad go'aansan doontaa mustaqbalkaaga boqornimo ee Reigns
Reigns waxay kuu soo jeedineysaa inaad ku ogaatid meesha waxa loola jeedo inaad noqoto boqor oo ay tahay inuu ogaado sida go'aan looga gaaro mustaqbalka boqortooyadiisa.
Istuudiyaha Noodlecake wuxuu keenaa sharad ahaan sida kubbadda loo yaqaan 'pinball' ee loogu talagalay Kirismaskaan oo leh baraf
Haddii aad raadineyso ciyaar gaar ah oo pinball ah iyo in miisaskeedu ay yihiin ballaarin iyo nuxur weyn, Snowball oo ka socda Noodlecake Studios ayaa qumman.